Ndezvipi zvakaderera SEO mazano emabhizimisi maduku akachengeteka?
Kunyange zvazvo "mutengo wakaderera SEO = nengozi" pane zvinyorwa kudarika mazwi chaiwo, matambudziko eSeO akaipa pamutengo usingadhuri haawanzwisisiki. Mabhizimisi maduku anogona kunyanya kurondedzera nechinetso ichi sezvo vazhinji vanoita mari shoma SEO masangano vanowanzotarisa ivo uye emabhizimisi emunharaunda uye zvizhinji zvekupa kwavo zvinonzwika chaizvo zvinofadza kune e-mabhizimusi uye nzvimbo dzinoedza kukurudzira mukukwikwidza kwakanyanya.
Kutarisa mutengo wakaderera SEO inopa zvisinganzwisisiki inogona kutungamirira kumigumisiro iyi:
Chirango nemhaka ye Black Hat SEO. Vazhinji SEO masangano anonyatsovhara Google mirayiridzo nemashoko epamusoro spamming, magwaro akavanzika, masuo nemimwe miitiro yakaipa zvinowanzopa mitengo yakaderera yebasa ravo. Iyi ndiyo chikamu chemusungo wavo: vanopikira kukurudzira kwakasimba pamutengo unofadza uye kununura kukuvimbiswa kwakavimbiswa. Nhungamiro yakadaro inovapa vazhinji vadzidzisi vepasi vasina ruzivo vasina kuziva kuti kuwedzera kwekutsvaga kunowanikwa kuburikidza neHlack Hat SEO ndeyechinguva uye kudonho kukuru hakudzivisiki.
Kupona. Dzimwe nguva, unowana mari shoma SEO mazano kumakambani maduku kana mabhizimisi makuru asiri Black Hat. Panzvimbo pezvo, ivo vanongogumira mune zvingasarudzwa zvekusimudzirwa uye matanho ose anoitwa neboka risina ruzivo. Nokudaro, mushure mekunge mazadzisa pane imwe nzvimbo, mushandirapamwe wenyu unongopera ipapo sezvo SEO yako curators isingazivi kuti inobva kupi pano. Uyewo vangangodaro vasina nzira yekufambisa mberi, semutengo wakaderera = mubhadharo wakaderera.
Low quality yezviri mukati. Chinobudiswa chinonyanya chikamu chikuru mumashoko makuru ekugadzirisa, chivako chekubatanidza uye kuwedzerwa kutendeuka. Kunyange zvakadaro kana zvinhu zvako zvisingabatsiri, zvakasiyana-siyana kana zvinonakidza kuverenga, kuisa mazwi makuru nehukama hazvingawedzere nzvimbo yako. Zvinosuruvarisa, kunyorwa kwekunyora kwakabatanidzwa mubhadharo dzeEOO dzebhizinesi rebhizimisi kazhinji zvinoreva kushandiswa nekugadziriswa seboka rakadaro kazhinji risina vanyori vane ruzivo. Saka, usatarisira migumisiro mikuru kubva pane zvawakabhadhara iwe $ 10.
Tsanangudzo iyi haireve kuti iwe unofanirwa kudzivisa "kutengesa" uye "kusina mari" SEO chero. Izvo zvaunofanira kuita, ndeyekuziva njodzi dzinobatanidzwa kana uchitsvaga mari shoma SEO maitiro emabhizimisi ako maduku. Iko kusinganzwisisi nguva dzose hakuenzaniswi nematengo, uye mutemo wekutengesa kwekutengesa haisi iyo inofananidzwa neyo scam. Nepo kune nhengo dzakaipa, izvo zvinoparadza mukurumbira weZE firms, tichakubatsira kuti uwane kusiyana.
Dzimba dzinotengesa uye dzinodhura: chii chakasiyana?
Zvinogoneka kutsvaga SEO yakanaka pamutengo wakakwana kunze kwezvizhinji zvehurumende dzakaderera. Iwe haufaniri kuva SEO guru kana uine nhema detector uripo. Kunyatsotsvakurudza kwakanyanya kupfuura zvakakwana.
Nyora urongwa hwemasangano eSeO, anopa rubatsiro rwemutengo unodhura hwebhizimisi kumabhizimisi maduku;
Enzanisa zvavanoita uye mararamiro avanogovera pamutengo iwoyo;
Tarisa nenzira iyo vanozvikurudzira ivo pachavo: kana vakavimbisa zvibereko nokukurumidza uye kuwedzeredza, zvipikirwa zvavo zvinogona kunge zvisina kunaka pasina;
Ona kana ose ehurumende ane pepodfolio. Dzoka kunze kwemakambani pasina imwe. Zvadaro dzidzai mapurogiramu emahofisi akashanda pakuongorora mazano avo. Iwe unogonawo kushanyira nzvimbo iyo mahofisi akaita SEO kuti aone kuti vanoita sei zvakanaka kune vadzikwi vavo.
Taura nevadzidzisi vebazi rega rega uye ona kuti vanoita sei, kana vane chivimbo uye vane ushamwari kana vakavanzika, vasinganzwisisi uye vachikurumidza kuti iwe utenge zvigadzirwa zvavo. Vabvunze mibvunzo inogona kuzivisa ruzivo rwavo rweGoogle mazano, nzira yekusimudzira uye nzira dze SEO. Vari kukurumidza kukupikirai mhinduro kunze kwekunge bvunza zvakawanda nezveseiti yenyu? Vanosimbisa here nezvehuwandu uye mhedziso yenguva pfupi?
Dzidza mamiriro acho ezvinhu uye bio yekambani. Kunyange zvazvo masangano ane makore mashanu ezvakanaka ari nani, usakurumidza kukanda mapikicha ane makore gumi kubva kure. Makambani mazhinji evechidiki akatevedzwa nevadzidzisi vange vari mubhizimisi kwemakore gumi. Iyi pfungwa inofanirawo kutaurwa mu bio yekambani uye bhuroji kana pane imwe.
Tarisa mhinduro. Kazhinji, makambani ose anovimbika anoisa maonero avo pane yavo yepaiti kana kuti ane kero pawebsite yekuongorora kuti vatambi vasiye mhinduro uye vopindura. Kana sangano, iro rinopa mari shoma SEO mazano emabhizimisi mashoma ari muIndaneti inorega kuwirirana nemashoko, zvichida haisi yakachengeteka kubata.
Mazuva ano, SEO makambani anouya mumhando dzakasiyana-siyana uye anosvika purogiramu yavo yekutengesa zvakasiyana. Nokudaro, panzvimbo pokuti iwe uchitendeuka kubva kumapoka eSEO, ayo anokupa mazano asingadhuri, ita zvitsva zvako uye ona muyero chaiyo wekutengesa uye hutano Source . Zvimwe zvimwe ungave uchitadza zvimwe zvinoshamisa zvinoshandiswa!